राजेन्द्र बानिया : “कुलमानलाई देश निकाला गरौं !” – Dainiki Online
30/05/2021 30/05/2021 adminLeaveaComment on राजेन्द्र बानिया : “कुलमानलाई देश निकाला गरौं !”
राजेन्द्र वानियांं एक समय देशमै बसेर यहाँको शिक्षाको बिकासमा योगदान गर्छु भनेर डा श्रीरामभक्त माथेमा कम्बोडियाबाट नेपाल आउनुभयो । केही बर्ष काठमाडौमा बसेर केही शैक्षिक संस्थामा काम पनि गर्नुभयो,अन्तत केही बर्ष अघि उहाँको चित्तदुख्दो अनि निराशाजनक अभिव्यक्ति आयो -” म हारेँ,काम गर्ने कुनै सकारात्मक बाताबरण भएन । म त्यसैले गह्रौ मन लिएर कम्बोडिया फर्कँदैछु । अर्को एक प्रसङ्गमा ७४ सालतिर भर्खरै कार्यकारी प्रमुख भएको बेला कुलमान घिसिङसङ्ग उहाँकै कार्यकक्षमा अन्तरबार्ता गर्दा उहाँले आफ्नो प्राधिकरणको जागिरको अनुभव सुनाउँदा दुई बर्स बिना काम हाजिर गरेर तलब खान परेको पीडा सुनाउनुभएको थियो । तिनै घिसिङ कार्यकारी प्रमुख भएसी भाद्रमा दैनिक ७ घण्टाको लोडसेडिङ तिहारको दिपावलीको दिन समेत देशमा लोडसेडिङ भएन । यो घटनाले पनि हामी कति प्रतिभा पारखी रहेछौं भन्ने देखाउँछ । अहिले गोबिन्द केसी जुम्लामा अनसन बसेका छन् । ती फकिरलाई कसले उचालिदियो र बिगतमा सानो कुरा हुनासाथ पलेटी कसिहाल्थे त्यसको समीक्षा पछि गरौँला तर उनका केही बिसय त पुष्टि भएका छन् नि । स्वास्थ्य क्षेत्र माफियाको हातमा गयो भने जनताले दुख पाउँछन् भन्ने उनको बुझाइ त अहिले फैलिएर सरकार नै माफियाको हातमा गएको हैन र? जुम्लाजस्तो ठाउँमा कर्णाली स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने र त्यसलाई सुबिधासम्पन्न बनाउने उहाँको मागमा सरकारलाई किन बिमती? प्रष्ट छ, मोफसलमा स्वास्थ्यका सुबिधा पुर्याउँदा शहरमा बसेर जनता मारेर नेता पोस्ने कसाहीहरुको सुसेधन्दा चौपट हुन्छ हो ? कुलमानका बिसयमा अहिले एकपछी अर्का जलमाफिया राजनितिक व्यापारी कम्मर कसेर लागेका छन् । यो मामिलामा सरकारमा बस्ने कतिले निर्लज्जताको पराकाष्ठा नाघेका छन् । नेता र मन्त्री हुनु भनेको झुट बोल्ने लाइसेन्स पाउनु हो भने ठिकै छ हैन भने उर्जामन्त्रीले जनताका अघि सफेद झुट बोलेका छन् ।
मेरो जनतालाई चेतावनी छ- कहिलेसम्म बिबेक बन्दकी राखेर राजनितिक ब्यापारीलाई जनप्रतिनिधिको रुपमा जिताउँछौ हँ ? मन्त्रालयको तर्फबाट कुलमानको प्रस्ताव लैजान्छु भनेर मेरै कार्यक्रममा जनताकाबिच बोलेका र प्रतिबद्धता गरेका उर्जामन्त्री बर्षमान पुनले जनतालाई झुटो बोले बापत राजिनामा दिन पर्दैन ? कि प्रधानमन्त्रीले पुनको प्रस्ताब रोकेको हो भने जनतालाई प्रष्ट भन्नुपर्यो,हिसाब त्यतै मागौँला । कि लेनदेन नमिलेको ? कुलमानले गत चुनावमा चुनाब खर्च दिएनन् हो? पार्टी र नेता पाल्ने माफिया,बिचौलिया र इन्भर्टर ब्यापारीकै प्रभाबमा कानुनको अड्चन निकालेको भए यसको मूल्य महङ्गो पर्नेछ ,ढुक्क भए हुन्छ । अहिले सत्तामा बस्दा हामीलाई कस्ले के गर्न सक्छ भन्ने लाग्छ । यस्तै सोच्थे सद्दाम हुसेन,पर्भेज मुसरफ अनि हिटलर पनि । उनीहरुको नियती पढेको भए ठिकै छ,नत्र एकपल्ट पढेर ती मध्ये कसको नियती प्यारो छ,चिठ्ठा थु’त्दा भैगो । कुलमानलाई पुनर्नियुक्ती नगर्नुको कारण जनतालाई बताउने हिम्मत छैन ? कानुनले मिल्दैन भने अहिलेसम्मका कति नियुक्ती कानुनसम्मत् छन् ,सरकार स्वतन्त्र छनबिनका लागि तयार छ? मन्त्री सरहको सुबिधा दिएर प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त गर्ने कानुन चाहिँ कहाँ छ?कि सल्लाहकारका भाइ, मन्त्रीका नातादार, घरमुलीका हुक्के बैठके र धन्दाता बिचौलिया नियुक्ती गर्दा कानुन चाहिँदैन? कानुनले नमिलेको हो भने कानुन किन नसच्याएको ? जनताले चुनाबमा लोप्पा खुवाएकालाई संविधान संसोधन गरेर प्रधानमन्त्री बनाउन कार्यदल बनाउने नेकपाले कुलमानलाई कानुनको तगारो लगाउन खोजेको छ, जनताले आउँदो चुनाबमा यस्ता दललाई गरालो लगाउनेछन् । कुर्सी र शक्तीले मैमत्तहरु बिबेक बन्दकी राखेर अट्टहास गर्छन् । तिनैको फर्मानले पार्टीको प्रबक्तालाई कुलमानको पक्षमा बोल्न रोक लगाइएको छ । प्रबक्ता पनि कति निरीह,बच्चाले माथीबाट बारम्बार पिसाब गर्छ,अनि उनी टाउको सुम्सुम्याइरहने । के को लालसाले होला,त्यो दुर्गन्ध सहिरहन परेको ? अझ कुलमानलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउन समेत चुनौती दिइएको छ । आफुले जिन्दगीमा कहिल्यै प्रतिस्पर्धा नदेखेका, राज्यकोषबाट चाकडीका भरमा घर चलाएकाहरुले प्रतिस्पर्धाको कुरा गरेको सुहाउँदैन ।
४८ सालपछी पालैपालो सरकार र ढुकुटीमा रजाइँ गरेका अनि नातालाई पालो पुगेर नियुक्ती बिक्रीमा दलाल खरिद गरेकाले खुला प्रतिस्पर्धाको कुरा गर्दा प्रतिस्पर्धा भन्ने शब्द नै लजाउला । कुलमानले गल्ती नै गरेका छैनन् भन्ने होइन गरे होलान् ,तर तिमिहरुको अघि त्यो निकै कम होला । कुलमानले घोटाला गरेकै छैनन् भन्ने होइन,तर तिमिहरुले त घप्लक्कै पो गरेका छौ त । कुलमानले सबै गरे भन्ने हैन गर्न बाँकी होला या सकेनन् ,तिमिहरुले त गर्दा पनि गरे नौ र गर्दा पनि गर्दैनौ नि । कुलमानले तिमिहरुलाई टेरेनन् होला,तिमिहरुले चाहिँ जनतालाई टेरेका छौ र ?
अनि नियम जति जनताका नायक कुलमानले मात्र मान्न पर्ने हो र? कुलमान कसैका कुरा सुन्दैनन् निरंकुश र अधिनायक भए भन्ने लागेको भए,तिमिहरु भन्दा ठूलो अधिनायक को पो होला र ? हैन कुलमानले गरेका राम्रा कामले पोलेकै हो र ?उनकै कारण आफ्नो मान्छे नियुक्त गर्न गार्‍हो भएको नै हो भने कुलमान घिसीङलाई देश निकाला गरौं । बत्ती दिन र जनतालाई उज्यालो दिनु उनको गल्ती थियो भने कानुन बनाएर मृत्युदण्ड दिँदा नि भयो । न रहे बाँस न बजे बाँसुरी । चर्चित पत्रकार राजेन्द्र बानियाको फेसबुक वालबाट योपनि पढ्नुहोस राजेन्द्र बानिया“ले राजालाई लेखेको पत्र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई मेरो चिठठी पूर्ब महाराज तपाईं र मेरो निवास नजिकै छ तर भेट हुँदैन । म कहिले काहीं घरको छतबाट तपाईंलाई देख्छु र के छ हालखबर भनेर सोध्नुपर्ला भनेर छतमा उक्लिन्छु पनि । तपाईले मलाई टीभीमा देखेर चिन्नु भाकै छ होला भन्ने भ्रममा छु । मैले त २००७ सालदेखिको इतिहासमा तपाईलाई चिनेकै छु, मात्र तपाईले गद्दी छाडेको दिन तपाईको गद्दीमा बसेर सेल्फी खिच्ने पत्रकारको भिडमा म थिइन । मलाई तपाइको साँच्चै मायाँ लाग्छ । तपाईलाई ४ बर्षमा राजा बनाइयो, तपाईलाई थाहा नै थिएन किन बनाइयो, किन हटाइयो ?तपाईलाई पञ्चायत चलेको बेला खासै कसैले पुछेनन्, पुछ्न पनि परेन । तपाईं चुरोट, चिया लगायतको ब्यापारमा लाग्नु भो, कतिले मुर्ती पनि मिसाएर बिदेश तिर व्यापार गर्नुहुन्थ्यो भन्छन् । जब तपाईका दाजुको बंशनाश भो, तपाईं चर्चामा फेरि आउनुभो । कतिले दाइमारा भनेर चर्चा गरे कतिले राजा ? तपाईले देश चलाउने मौका पाउँदा मन चौधरीको जस्तो ब्यापारी, अनि इच्छा बाबू महेन्द्रको जस्तो महत्वकाँक्षी भएर चिप्लिनु भो । कम्तिमा दाजुको चार आना जमिन आफ्नो नाममा ल्याउने लोभ नगरी देश नै मेरो सम्पती अनि देशबासीनै मेरा सन्तान भनेको भए तात्कालिन सात दल बदामका ग्राहक हुन्थे, अनि माओवादी श्रीलंकाका तमिल । तर उद्दण्ड भनिएका पुत्र पारसको मोह धृतराष्ट्रका लागि दुर्योधन जस्तो भो । तर सलाम छ पूर्ब राजा, २४० बर्षको बिरासत छोड्दा पनि तपाईं हाँस्दै जानु भो । तपाईलाई यतिभन्दा फुट्दा तपाइले फुटाइदिएको र जुट्दा आफै भन्ने पूर्ब मण्डलेहरुलाई म पञ्च र राजाबादी लाग्ला । अनि क्रान्तिकारीको नाममा जनता रुवाउन पल्केकालाई म प्रतिगमनकारी लाग्ला ।
म कम्तिमा पनि तपाईको निरंकुश चरित्रको विरुद्ध सडकमा निस्केको सचेत नागरिक हो । भ्रममा नपर्नु होला । पछिल्ला दिनमा तपाईं मन्दिर डुल्दा र डिस्कोमा टोपी लाएर राष्ट्रबादी बन्दा मलाई तपाईमाथि धिक्कार लागेको थियो । नेपाली आमाले नेता र राजा जन्माउने कोख एउटै रहेछ भन्ने पनि लाग्या थियो । धेरै हिजोका हात्तीछाप आजका बेन्ट्ले नेता र तपाईं उस्तै लागेको थियो । मलाई त नेताहरु जस्तै तपाईं पनि कोभिड–१९ भएर या आशंकामा आइसोलेसनमा बसेकाले अनुहार देख्न नपाइएको होला जस्तो पनि लाग्या थियो । तर पूर्ब राजा, बीपी प्रजातन्त्रका घाती थिए भन्छन्, मलाई थाहा छैन ।उनलाई इन्दिरा गान्धीले घोक्राउने भएसी राजासङ्ग घाँटी जोडिएको छ भनेर ३३ सालमा नेपाल आएका हुन् तर उनले राजा कम्तिमा नि राष्ट्रलाई मायाँ गर्छन् भनेका थिए । हो रहेछ । प्रीय पूर्ब राजा, हिजै ब्यापारीबाट राजा बन्देको भए हामीलाई यस्तो नेता धनी र जनता गरिब हुने गणतन्त्र चाहिएको नै थिएन । हामीलाई एउटा राजाको ठाउँमा रजौटा चाहिएको नै थिएन । हामी यी दर्जनौलाई अर्बौं दिनु सट्टा तपाईलाई खुशी खुसी महिनाको चार करोड दिन्थ्यौ । आज तपाईले कोरोनाले रोइरहेका गरिबलाई २ करोड दिने भनेर फेरि नेता भन्दा माथी हुनु भाको छ । मलाई मैले भात खुवाएको आज भुजा खाने, हिजो चप्पलको तुना फेर्ने आज बतननै फेर्ने, हिजो जनै नलगाउने आज हिराको हार लगाउने, हिजो हिड्दा खुट्टा फुट्ने आज ८४ ब्यञ्जन नपचेर भुँडी फुट्ने नेता भन्दा तपाईं प्यारो लाग्न थाल्यो पूर्ब राजा
Tagged कुलमानराजेन्द्र बानिया